२०७६ मा विहे गर्ने विचार छ, कुन महिनामा कति दिन छ लगन ? - NepalDut NepalDut
२०७६ मा विहे गर्ने विचार छ, कुन महिनामा कति दिन छ लगन ?
वि.स २०७६ सालमा बिवाहको लगन धेरै जुर्न पुगेको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समिति यस बारेमा जानकारी दिँदै आगामी बर्षमा धेरै बिवाहको लगन जुरेको बताएको हो । समितिका अनुसार विवाह हुने महिनाहरु वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ र फागुन महिनाभर नै बिहेको लगन धेरै छ ।
वैशाखमा ११ दिन, जेठमा १७ दिन, असारमा १० दिन, मंसिरमा ८ दिन, माघमा ९ दिन र फागुनमा ११ दिन विवाहको लगन परेको छ । केही वर्षदेखि लगन नहुने महिना र दिनमा पनि बिहे गर्न चलन भए पनि धेरैले विवाहको लागि लगन नै हेर्ने गर्छन् ।
सार्वजानिक बिदा समावेश नगरी विसं २०७६ को पात्रो (पञ्चाङ्ग) प्रकाशन भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।समितिले विसं २०७६ का लागि तोयनाथ, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति र सिद्धि गरी १३ वटा पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिएको छ ।समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका धर्मशास्त्रविद् विद्वानको छलफलमा आगामी वर्षको चाडबाडसम्बन्धी निर्णय गरिएकाले स्वीकृत पात्रो प्रयोग गर्न समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले आह्वान गरेका छन ।
आफूखुशी निस्कने पात्रोका कारण मानिसमा चाडबाडसम्बन्धी भ्रम सिर्जना हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विसं २०७६ मा दिइने बिदाको सूची उपलब्ध नगराएकाले आगामी वर्ष पनि पात्रोमा सार्वजनिक बिदा समावेश हुन नसकेको उहाँले राससलाई जानकारी दिए । यसअघि २०७४ र २०७५ सालमा पनि सार्वजनिक बिदा नराखी पात्रो प्रकाशन गरिएको थियो । ‘सार्वजनिक बिदा गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने सूचना पात्रोमा राखिएको उनले बताए ।